Ubudlelwane Wedding Ukukhishwa komshado
Iphuzu eliphoqelekile lokulungiselela umakoti emshadweni ngumuthi womshado. Ungaya ku-salon beauty, shayela inkosi ekhaya noma ungenza isikhumba sakho sekhono ekhaya. Lokhu akulona nzima kakhulu, uzodinga izakhi zokuhlobisa ngezipikili, ama-varnishes, amathuluzi nokubekezela okuncane.
I-Silvery noma i-glitter yegolide.
Amapharele kanye nama-rhinestones.
I-lacquer e-opaque emhlophe.
I-Lacquer emthunzini we-pastel.
Ukugcoba komakoti kungabonakalisa futhi kube mnene, futhi mhlawumbe kungcolile futhi ku-avant-garde, konke kuxhomeke ekuthandweni komlobokazi nakwesithombe esikhethiwe. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuhlola isembatho somshado nezesekeli zalo, ukunquma ukuthi yikuphi okuklanyelwe ukuklama okufanele. Ngengubo enhle yama-classic, iziketi ze-tulle, zizobukeka njengezipikili ezindala ezingekho isikhathi eside nge-French manicure noma nge-varnish yamathrekhi we-pastel. Indwangu emifushane futhi ephumelelayo ifaneleka kumklamo ohehayo ngemibala ehlukile noma ngemidwebo. Ohlangothini lobuciko bomlobokazi lungumuthi ongajwayelekile ongavamile kanye nezinhlanganisela ezinamandla noma nge-aquarium design.
Akunzima ukwenza umuthi womuntu omdala kumakoti. Ukuze wenze lokhu, udinga ukupihla izipikili bese ubanika ukuma okufunayo. Susa i-cuticle, usebenzise ikhambi elikhethekile kulo futhi ususe izinsalela zenduku esivela esihlahleni se-orange. Vala i-plate ye-nail ngesisekelo sokulinganisela. Khetha i-varnish ukuze ihambelane nengubo yomshado. Uma ngabe ingubo i-aiouri, i-beige elula, ukhilimu, ama-shades amancane azokufanisa. Futhi ku-silver suit suit, ekhanyayo emhlophe, ekhanyayo pink shades. Ama-varnishes kudingeka akhethe ukuthungwa okunekhono, okuguquguqukayo, kubonakala kuyimvelo.
Kuzipikili kuyadingeka ukuthi usebenzise ezendatsheni ezingu-3 u-koqweqwe lwawo womthunzi okhethwe nguwe, kuye ngokulingana koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo. Isipikili esisodwa noma ezimbili ukuhlobisa ngezingqimba eziningana noma amapharele, kuxhomeke kulokho okugqoka umshado.
Le manicure izothatha isikhathi eside. Kubalulekile ukulungisa izipikili nokumboza ngesisekelo sokulinganisela. Thatha imikhakha ekhethekile futhi unamathisele ku-nail. Faka i-koqweqwelo elimhlophe le-opaque ngamathiphu, wenze kahle. Bese usula umgqoko bese wenza i-nail light-transparent varnish - emhlophe emhlophe, pink pink noma ukhilimu. I-varnish kufanele ihanjiswe ngokulinganayo ngaphandle kwe-streaks nezintambo.
Ukuze unikeze i-manicure ukubukeka nokuqeda imikhosi, udinga ukuhlobisa izipikili zakho nge-sequin. Basebenzise phakathi kwekhanda elingasese le-nail ne-tip elimhlophe. Faka isicelo ngokushelela nge-brush encane. Ngendwangu ye-shades epholile, i-glitter yesiliva izobukeka ihle, futhi i-glitter yegolide ingafika emgqeni wendwangu enemibala efudumele.
Sithemba ukuthi lezi zeluleko zizokusiza wenze umuthi omuhle womshado.
Luhlobo luni lomuthi olungcono kakhulu?
Vumela ipeni lakho, lady: yenza umuthi womshado
I-Wedding Design Izipikili ezikhonjiwe
Ukukhwabanisa komshado wesiFulentshi
Ingabe kuyiqiniso ukuthi bonke abantu abakwazi ukuphila ngaphandle kocansi?
Ukuphila okusha kumuntu wanamuhla
Gem kusuka ugqumugqumu kanye cherry sweet
Izinqubo zokunakekela isikhumba ebusweni
Umlobokazikazi: Izitayela zemishado zesiGreki
I-Classic Pesto sauce
Ecology kanye nokuvikelwa kwemvelo
Ukuhlunga kwe-Balinese yokukhuthazwa kwezempilo
Ubudlelwano phakathi kwabafana abancane nabesifazane abangaphezu kuka-30
Umqeqeshi we-Elliptical: inzuzo, izinkomba, isicelo sokulahlekelwa isisindo
Ingabe kukhona amadoda afanelekayo?
Impi ibonakala ini?
Izinzuzo zemidanso yaseMpumalanga
Ukuphuza kwengqondo kwengane